Dhakhaatiir bartay Cilmi aan dalka gudihiisa hore loogu qaadan oo munaasibad loo qabtay | Somaliland.Org
Dhakhaatiir bartay Cilmi aan dalka gudihiisa hore loogu qaadan oo munaasibad loo qabtay
May 27, 2010	Hargeysa (Somaliland,Org)- 9 Dhakhtar oo ka kala yimid deegaanada Soomaalidu degto ee Geeska Afrika, ayaa maanta la gudoon siiyay shahaadooyinkii ka dib markii ay Magaalada Hargeysa ku dhamaysteen tababar qaatay muddo lix Todobaad ah oo ay ku baranayeen mishiinka uurku jirta (UltraSound).
Tababarkaasi oo ay fulintiisa iska kaashadeen Jimciyada samo-falka ee Manhal iyo machadka caalamiga ah ee (Afro Asian Institute of Medical Science).
Xafladii loo sameeyay shahaado gudoonsiinta dhakhaatiirtaasi oo lagu qabtay Huteelka Ambassador ee Magaalada Hargeysa waxa ka soo qeyb galay Wasiir Ku Xigeenka Wasaarada Caafimaadka Md. Mahdi Cismaan Buuri, Agaasimaha Guud ee wasaarada Caafimaadka iyo shaqada Md. Ibraahim Diiriye Xayd, Masuuliyiinta Haayada Manhal iyo sarkaal ka socday Haayada WHO.
Guddoomiye Ku Xigeenka Haayada samo-falka ee Manhal C/Laahi Carab, oo ka hadlay xafladaasi ayaa sheegay in Haayadaasi ay tahay mid samo-fal oo ka shaqeysa dhinacyada caafimaadka, Waxbarashada iyo Biyaha.
C/Laahi Carab, wuxuu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay tababarkan ay dhamaysteen Sagaalkaasi dhakhtar waxaanu tilmaamay inay dhakhaatiirtaasi oo ka kala yimid deegaano kala duwan ay juhdi badan u galeen sidii ay uga midho dhalin lahaayeen Tababarka mishiinka uur ku jirta oo uu xusay inay ahmiyad weyn u leeyahay adeega caafimaadka bulshada.
Guddoomiye Ku Xigeenka Haay’ada Manhal waxa kale oo uu sheegay in ay ka faa’iidaysteen in ka badan 200,000 oo qof mashruuca dawaynta iyo qaliinka indhaha ah ee ay manhal ka fulisay gobolada dalka dhawrkii sanadood ee la soo dhaafay “Waxa kale oo aanu baadhis iyo dawayn indhaha ah u samaynay ardayda dugsiyada dalka oo tiradoodu gaadhayso illaa 9000 oo arday, waxaana noo qorshaysan inaanu 50.000 oo arday oo wax ka barta dugsiyada dalka. Waxaan idiin sheegi karaa in dedaalka mashruuca caafimaadka indhaha ee Manhal inuu yahay mid looga yimaado dalalka Geeska Afrika oo dhan waxaana mandaqada ugu horreeya dhinaca indhaha Cisbitaalka Manhal,”Ayuu yidhi Guddoomiye Ku Xigeenka Haayada Manhal.
Maxamed Ibraahim, oo ah madaxii tababarkaasi gacanta ku hayay oo xafladaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu mahad celiyay Haayada Manhal dedaalka ay u gashay sidii loo hirgelin lahaa tababarkan waxaanu sheegay in baahi weyn looga goobaha adeega caafimaadka mishiinka uurkujirta.
Maxamed Ibraahim waxa kale oo uu ammaanay dhakhaatiirtii tababarkaasi dhamaysatay oo uu ku sifeeyay inay ahaayeen dad xul ah oo waayo aragnimo caafimaad oo hore lahaa, waxaanu ku booriyay inay aqoontii ay ka korodhsadeen tababarkan ugu adeegaan bulshadii ay ka yimaadeen.
“Waxa tababarkan waxa loo qabtay waxa baahi weyn looga qabaa xarumaha caafimaadka ee dalka mishiinkan uur-ku jirta (Altra Sound) waxa darruuri ah in mishiinkan loo baahan yahay in loo helo dad u dhashay dalka oo ku shaqayn kara ugu yaraan goob kasta hal qof, ilaahay mahadii wuu guulaystay tababarkani waxa ka soo baxay midho fiican waxaana ku ammaanayaa Haayada Manhal oo la garab taagnayd wax kasta oo tababarkani u baahnaa,”ayuu yidhi Madaxii tababarka mishiinka Altra Sound.
Xidhiidhiyaha mashruuca ka hortaga Indho la’aanta ee Haayada WHO Dr. Xanaan Choudhury, oo ka hadlay xafladaasi ayaa sheegay in Haayadiisu ay cisbitaalka Manhal kala shaqeyso sidii kor loogu sii qaadi lahaa adeega ka hortaga indho la’aanta ee ay ku hawlan yihiin.
Waxaanu sheegay inay sii wadayaan iskaashiga shaqo ee ay la leeyihiin Haayada Manhal.
Wasiir Ku Xigeenka Wasaarada Caafimaadka iyo shaqada Md. Mahdi Cismaan Buuri, oo ka hadlay xafladaasi ayaa aad u soo dhaweeyay dhakhaatiirtan tababarka dhamaystay waxaanu u soo jeediyay inay dalkooda u shaqeeyaan waxaanu yidhi “Aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa Cisbitaalka Manhal dedaalka ay u galeen dhamaystirka tababarkan waxaanan leeyahay dhakhaatiirtii dhamaystay tababarkan dadkiina iyo bukaanada idiin yimaada si naxariis leh ugu adeega aqoontan aad barateen.”
Afro-Asian Xaruntiisan magaalada Hargeysa waa farac ka mida Machadka Caalamiga ah ee Saldhigiisu yahay dalka Pakistan ee Afro-Asian Medical Science, waana xarun dunida kaga caan ah dhinaca mishiinka baadhista uurku jirta ama Ultrasound-ka, inta badan wadamada Europe iyo Maraykanka waxay u sameeyaan daraasadaha la xidhiidha Ultrasound-ka, faracan ayaa la filayaa in dufcadda labaad ee dhakhaatiirta ah ee xiisaynaya barashada Ultrasound-ka inuu qaato badhtamaha bishan lixaad.
Previous PostTaliyihii Booliska Dila oo loo xidhay inuu is-hortaagi waayay taageerayaal KULMIYE u soo baxayNext PostCismaan-Hindi oo xubin Xisbigooda UDUB ka tirsani Dhaawac gaadhsiiyay	Blog